Bit By Bit - Ubunzima intsebenziswano - 5.5.4 Yenza ndothuka
Ngoku ukuba abantu ngeentlobo ukusebenza kunye ingxaki yenzululwazi enentsingiselo, yaye kufuneka ingqalelo ingqalelo apho kusenokuba yeyona exabisekileyo, qiniseka ukuba aphume kwigumbi ukuze iniqubule. Oku intle ukuba izazinzulu ummi ziye enombhalo iminyele e Galaxy Zoo yeyozuko neeproteni e Foldit. Kodwa, kakade, loo nto ezi iiprojekthi equlunqelwe ukuba. Yintoni eyona emangalisayo kakhulu, ngokoluvo lwam, kukuba uluntu zivelise iziphumo zenzululwazi ezibe ingalindelwanga nkqu kwabayili zabo. Umzekelo, uluntu Galaxy Zoo iye yafunyanwa kwaye udidi olutsha into ngeenkwenkwezi ukuba ngokuba "ERTYISI Green."
kwangoko kakhulu kwiprojekthi Galaxy Zoo, bambalwa abantu ndaphawula izinto eluhlaza engaqhelekanga, kodwa nomdla kuzo shwa xa hanny Von Arkel, utitshala wesikolo Dutch, waqalisa ngomsonto kwi Galaxy Zoo ingxoxo kunye nesihloko anomtsalane: "Nika ERITYISI indawo . Chance "umsonto, eyaqala Agasti 12, 2007, waqala iziqhulo:" Ngaba ndibaqokelela sangokuhlwa "," eRTYISI bayeke ", njalo-njalo?. Kodwa, kwamsinya ezinye Zooites baqalisa ngokuthumela ertyisi zabo. Ekuhambeni kwexesha kwizithuba baba zobugcisa ngakumbi eneenkcukacha de izithuba oku baqalisa bonisa: "Umgca OIII (i 'ertyisi' umgca, ngo 5007 angstrom) ukuba zilandelayo iishifti ekuyeni ebomvu njengoko z Ukunyuswa Watshon infra-red malunga z = 0.5, oko kukuthi ungenakubonwa " (Nielsen 2012) .
Ekuhambeni kwexesha Zooites ngokuthe ukuqonda kwaye systematizing bakuqapheleyo zabo ertyisi. Okokugqibela, ngoJulayi 8, kamva-Carolin 2008-phantse umnyaka Cardamone, zeenkwenkwezi ophumelele umfundi e Yale kunye ilungu leqela Galaxy Zoo, zihlangene obenosinga ukunceda ekulungelelaniseni "ertyisi Hunt." Umsebenzi Okuninzi ngehlombe incoko yaye ngoJulayi 9, 2009 iphepha eyapapashwa kwi Izaziso ngenyanga Royal Astronomical Society nesihloko "Galaxy Zoo Green ertyisi: Ukufunyanwa Class of IiBhalbhu kakhulu Star-Ndiyila njengeeNkwenkwezi" (Cardamone et al. 2009) . Kodwa, akazange kuphelele apho umdla ertyisi. Kamva, baye kwisifundo uphando ngokuthi ngeenkwenkwezi ehlabathini jikelele (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Emva koko, ngowe-2016, kwiminyaka ngaphantsi kwama-10 emva kokuba isithuba engowokuqala Zooite, iphepha epapashwe Nature ecetywayo ERTYISI Green njenge ingcaciso yokuba iipateni ebalulekileyo engaqhelekanga kwi oluzakuvulwa wendalo. Akukho oku wakhe wacinga xa Kevin Schawinski noChris Lintott elayixubusha Galaxy Zoo kwindawo Pub e Oxford. Ngethamsanqa, Galaxy Zoo kwanceda aba iintlobo ezimangalisayo engalindelekanga ngokuvumela nje nxaxheba ukunxibelelana nabanye.